Kanto iadiana amin’ny herisetra :: Hanavao ireo hetsika ara-kolontsaina hibeazana ny tanora ny « Tambohobe » • AoRaha
Kanto iadiana amin’ny herisetra Hanavao ireo hetsika ara-kolontsaina hibeazana ny tanora ny « Tambohobe »
Nahafantarana ny fikambanana « Tambohobe » ny fanoloran’izy ireo ny « Festisôva », izay hanandratana ny Vakisôva. Nana­vao ny birao mpitantana azy ny fikambanana tetsy amin’ny Le Pavé Antaninarenina omaly. Lany ho filoha Andrianarivelo Hasina.
« Hivelatra sy hanohy ny ezaka ho amin’ny tsaratsara hatrany ny fikambanana », hoy ireo birao vaovao. Manana tanjona ny hamerenana indray ny hasin’ny soatoavina malagasy sy ny raiamandreny ary ireo antanantohatra rehetra mifototra amin’ny kolontsaina sy mampifandanja ary mampilamina ny fiarahamonina izy ireo.
Fito ambin’ny folo taona no nisian’ny fikambanana. Ny fahatsapan’izy ireo ny firongatry ny herisetra, indrindra eo amin’ny ankizy sy vehivavy, teny Andraisoro, toerana misy ny fikambanana, no nahatonga azy ireo hivondrona. Ankoatra ny fifaninanana ara-panatanjahantena, maro ireo hetsika ara-kolontsaina toy ny hira gasy goavana, ny gazety an-kira izay nohavaozina ho “Festisôva” ary notanterahina tamin’ny taona 2018 ny andiany fahadimy. Nanorina ny « Tranoben’ny Boky » ihany koa izy ireo ny taona 2003 hatramin’ny 2018 mba hampianarana ireo ankizy tsy tafiditra an-tsekoly.
Fifanekena ara-barotra :: Vitsy mpahalala ny lanjan’ny asan’ireo nôtera eto amintsika
Ambatondrazaka :: Votsotra ilay ankizy nisy naka an-keriny